ရာစုနှစ်အကုန်တွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည်ဥရောပသား ၁၅၂ သန်းကိုသေစေလိမ့်မည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်များ အပူလှိုင်းများ သို့မဟုတ်အအေးမိခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေလွှမ်းမိုးမှုများသည်လူတို့၏ဘဝကိုခြိမ်းခြောက်နေသောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပြီး Lancet Planetary Health ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုအသစ်အရ၊ ၂၀၇၁ နှင့် ၂၁၀၀ အကြားတွင်သဘာဝကပ်ဘေးတစ်ခုကြောင့်ဥရောပသား ၁၅၂၀၀၀ သည်သူတို့၏ဆုံးရှုံးမှုကိုခံရနိုင်သည်။.
ညစ်ညမ်းသောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှုကိုအရေးတကြီးလျှော့ချပြီးသင့်လျော်သောအစီအမံများမပြုလုပ်ပါကမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောသေဆုံးမှုပေါင်း ၃၀၀၀ တွင်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်သွားနိုင်သည်။
သုတေသီများသည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းဥရောပ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောမိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ် ၂၃၀၀ ၏မှတ်တမ်းများကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပြီးလူ ဦး ရေ၏အားနည်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ထိုအချက်အလက်များကိုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောစီမံကိန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုသိရှိနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ထိုအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့သည် အပူလှိုင်းများသည်သေစေလောက်သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်သေဆုံးမှု ၉၉% ရှိသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဤပြင်းထန်သောအဖြစ်အပျက်များကြောင့်သေဆုံးသူ ၂,၇၀၀ ရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၇၁ မှ ၂၁၀၀ အတွင်း ၁၅၁,၅၀၀ ခန့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကမ်းရိုးတန်းရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်သည်လည်းရာစုနှစ်အစပိုင်းတွင်သေဆုံးမှုခြောက်နှစ်မှ ၂၃၃ သို့မြင့်တက်လာနိုင်သည် အဆုံး။ မီးလောင်ခြင်း၊ မြစ်ရေကြီးခြင်း၊ မုန်တိုင်းထန်ခြင်းနှင့်မိုးခေါင်ခြင်းတို့ကြောင့်လူအများအပြားသေဆုံးနိုင်သော်လည်းတိုးတက်မှုမှာများစွာသေးငယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်တိုက်ကြီးဟောင်း၏တောင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောဥရောပသားများအထူးသဖြင့်အပူပြင်းထန်သောအပူသည်အဓိကပြproblemနာဖြစ်သည်။ ဤနိုင်ငံများတွင်စပိန်၊ အီတလီ၊ ဂရိတို့ပါ ၀ င်သည်။ အပူလှိုင်းများသည်တစ်နှစ်လျှင်လူ ဦး ရေသန်း ၇၀၀ ကိုသေစေနိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ရာစုနှစ်အကုန်တွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ဥရောပသား ၁၅၂၀၀၀ ကိုသေစေလိမ့်မည်